ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5Romance ကို Regenerate ဖို့စိတ်ကူးများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇူလိုင်. 02 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
နယူးဆက်ဆံရေးကိုအစဉ်အမြဲစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရှိပါတယ်, ပျော်စရာ, နဲ့အသည်းအသန်. သို့ရာတွင်များစွာသောအတွေ့အကြုံကိုအချိန်ဖြစ်စဉ်များအဖြစ်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်တဲ့ Fade. စောစောလုံလောက်နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုတွေ့မြင်လျှင်, ဒီမှာသင်ကအချစ်ဇာတ်လမ်းတက် perk နှင့်မီးပွား regenerate မှပြုနိုင်သည်ငါးခုအရာဖြစ်ကြ၏:
1. Secret ကိုမှတ်စုများ
သူသို့မဟုတ်သူမ၏တစ်နေ့တာလုံးကိုကျပန်းအချိန်လေးမှာရှာတွေ့နိုင်ဖို့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်များအတွက်မျှော်လင့်မထားတဲ့အရပ်တွင်အနည်းငယ်သောမေတ္တာမှတ်စုများကိုစွန့်ခွာဖို့ကြိုးစားပါ. သူတို့အလုပ်ကိုထွက်ဦးခင်မှာသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရဲ့လက်ဆွဲအိတ်တလုံးထဲတွင်မက်ဆေ့ခ်ျကို drop, ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့တစ်နေ့အလုပ်ချိန်ရဲနှင့်သူတို့ကိုအလုပ်အပြီးသင်ကိုမြင်ဖို့မျှော်ကြည့်ရှုဖြစ်စေမည်. သူတို့တစ်တွေခရီးစဉ်အတွက်ထွက်ခွါရှေ့တော်၌မိမိတို့အထုပ်အပိုးများအတွက်တိုတောင်းတဲ့မေတ္တာကိုစာတစ်စောင်ကိုတင်, သူတို့ကိုသင်သည်ထိုသူတို့လက်လွတ်ကြလိမ့်မယ်လို့သိကြပြီးအိမ်ပြန်သည်အထိမစောင့်ဆိုင်းနိုင်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်. ရေးပါ '' ငါသည်သင်တို့ကိုကိုချစ်’ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးရေချိုးခန်းကြာမယ့်အချိန်တွေအတွက်ရေချိုးခန်းကိုထင်ဟပ်ပြသမှုအပေါ်ရေနွေးငွေ့တစ်ဦးနှလုံးဆွဲ. pin သူတို့အနေနဲ့ပြောစရာကို run ရန်ရှိသည်လာမည့်အချိန်ကိုသင်ချစ်တဦးတည်းရဲ့ကား windshield မှမှတ်စုတစ်ခု.
သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်အချစ်ဇာတ်လမ်းပြန်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြသောအခါသူတို့သည်သင့်အားသိသိသာသာတွေဟာဘာကြောင့်ပရိယာယ်သင့်သိသာထင်ရှားသောအခြားသတိပိုမိုင် Going ကြီးမားတဲ့အကူအညီနိုင်ပါတယ်. သင်သည်သာအခြားသူတစ်ဦးသင်သည်ထိုသူတို့စဉ်းစားနေကြသည်ကိုသိမသွားပါစေလိမ့်မယ်, သင်မူကား, အဖြစ်ကိုကောင်းစွာသောနေ့ရက်ကာလကိုတစ်လျှောက်လုံးသူတို့၏စိတ်တွင်နေမည်.
သင်တို့၏ဆက်ဆံရေး၏အစအဦးကိုသတိရပါ? သင်နှင့်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားလုံးတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကျော်အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖြစ်ကြောင်း, တိုင်းအခါသမယမှာလက်ကိုကိုင်ပြီး, ရှည်စွာသောဟုဆိုလျက်, နေ့စွဲရဲ့အဆုံးမှာအသည်းအသန်နှုတ်ဆက်, အသီးအသီးအခွင့်အလမ်းမှာအချင်းချင်းပွေ့ဖက်. သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်ပိုမိုချစ်ခင်ရတဲ့အားဖြင့်ရှေးကာလပြုပြင်မည်. သင်လမ်းပေါ်ဆင်းလမ်းလျှောက်အဖြစ်တက်လှမ်းနဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူလက်ကိုကိုင်ထား, ညစာမှာစားပွဲအောက်၌ footsies ကစား, နှင့်သင့်ရက်စွဲများရဲ့အဆုံးမှာသင်ချစ်တစ်ဦးရှည်လျားသောနမ်း Goodnight ပေး.
ပိုပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရယူခြင်းဆက်ဆက်လျော့ကျလာပြီဖြစ်ကြောင်းအချစ်ဇာတ်လမ်းပြုပြင်မည်ကိုကူညီနိုင်. အခွင့်အလမ်းတွေကိုများမှာ, သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်သင့်အချက်ပြမှုများအပေါ်ကောက်နဲ့ချစ်ခင်စုံမက်ခြင်းနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူအလှည့်တွင်တုံ့ပြန်မည်.
3. နှစ်ဦးသည်တစ်ဦးခရီးစဉ်တွင်တွင် Go
နေ့စဉ်ဘဝမှာစိတ်ကူးယဉ်ဆက်ဆံရေးလမ်းကိုရစေခြင်းငှါအလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. သင်အချစ်ဇာတ်လမ်းများအတွက်အချိန်မရှိဘူးတူတစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်ရိုးရိုးသားသားခံစား. ကွာအားလုံးဆီကရနှင့်သင်ကြားဆက်ဆံရေးပြန်လည်တည်ဆောက်အာရုံစိုက်ဖို့ကြီးစွာသောလမ်းအတူတူခရီးယူခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်. အားလပ်ရက်တနင်္ဂနွေသို့မဟုတ်ထွက်ပြေးဖို့စီစဉ်ထားပါ (သင်တို့ကိုသနားရှိသည်မည်မျှအချိန်ပေါ်တွင် မူတည်.) ပုဂ္ဂလိကစိတ်အပန်းဖြေဖို့အချိန်အများကြီးအကျုံးဝင်သည်နှင့်တစ်ဦးအပြန်အလှန်အကျိုးပြုအပေါ်တစ်ဦး. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အပူပိုင်းကျွန်းပေါ်တွင်ရေပူစမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်မှာတနင်္ဂနွေအလှည့်ကွက်ပြုလိမ့်မည်.
တနေ့ဘဝနေ့ကွာသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ထံမှသင်တို့ distracting အကယ်., စာသားကွာကြောင့်ခပ်သိမ်းသောအမှုထဲကဆိုတော့အားဖြင့်အာရုံထွေပြားမှလွတ်မြောက်ရန်. ဒါဟာသင်တို့၏ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၏ကမ္ဘာတစ်ခုပြုပါနှင့်သင်တို့၏နှစ်ဦးစလုံးအနားယူနိုင်. တစ်ဦးခြင်းစီအခြားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အချိန်ကိုဖြုန်းပါလိမ့်မယ်, အလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မရ, ကြောငျး, သို့မဟုတ်မိသားစုအရေးကိစ္စများ.
သတိရ, သင်သည်သင်၏ကောင်လေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေး snagged ပါပြီလို့, သင်သည်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ wooing ကိုရပ်တန့်နိုင်မဆိုလိုပေ. အချို့ကအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအစဉ်မပြတ်ချစ်ရသူနှင့်ဆန္ဒများကိုခံစားနိုင်ဖို့အတွက်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက် romanced ခံရဖို့လိုအပ်. သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ကျေးဇူးတင်စကားလက်ဆောင်တစ်ခုပေးကမ်းခြင်းအားဖြင့်သင့်ပိုးပန်းကာလကိုအောက်မေ့ Make. သင်များအတွက်ဘတ်ဂျက်ရှိသည်မပြုလျှင်လက်ဆောင်များပီပီအဖြစ်စရာမလို. တစ်ဦးကချောကလက်နှင်းဆီ, သေးငယ်တဲ့နည်းနည်း trinket, သို့မဟုတ်သင့်အကြိုက်ဆုံးမေတ္တာကိုသီချင်းလုပ် CD ကိုအလှည့်ကွက်ပြုနိုင်သည်.
၏သင်တန်းကိုတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့သောဆက်ဆံရေးရုပ်ပစ္စည်းများနှင့်လက်ဆောင်များထက် ကျော်လွန်. သွား, ဒါပေမဲ့, အချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်လျှင်သင်ပြန်ဆောက်ဖို့လိုချင်တာတွေ, လက်ဆောင်တစ်ခုသင်သည်သူတို့အား lovey dovey ခံစားချက်များကိုပြန်စီးသောဖို့လိုတယ်ဘာကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ. တစ်ခုခုကိုတစ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့သို့မဟုတ်မွေးနေ့သည်အထိမစောင့်ပါနဲ့. အဘယ်သူမျှမသရုပ်အကြောင်းပြချက်လက်ဆောင်တစ်ခုမျှော်လင့်ထားသည့်လက်ဆောင်တစ်ခုထက်တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုဝင်ဆံ့.
5. တနည်းချိန်းတွေ့ Start
မလုပ်ပါနှင့်, ငါ ထွက်. ဆိုလိုအသစ်နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကရှာမတွေ့ကြဘူး. ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ, နောက်တဖန်အရက်စွဲများပေါ်မှာသင့်ရဲ့ချစ်ရသူထဲကယူ. အလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ဘူးသောစုံတွဲများ, အတူတကွနေထိုင်ကြောင်းအထူးသဖြင့်, မကြာခဏပျော်စရာရက်စွဲများဖြစ်နိုင်ပုံအကြောင်းကိုမေ့လျော့. သူတို့ကညစာအတွက်သူတို့ထုံးစံအတိုင်းစားသောက်ဆိုင်ကိုထွက်၎င်းတို့၏ပုံမှန်အရာ n လုပ်နေတယ်တစ် rut သို့ပါလိမ့်မယ်, ရုပ်ရှင်ငှားရမ်း, သို့မဟုတ်ရေခဲမုန့် n အဘို့အထွက်ပေမယ့်အချစ်ဇာတ်လမ်း reignite ကြိုးစားနေချိန်တွင်အမှန်တကယ်ရက်စွဲ၏တန်ခိုးကိုလျှော့မတွက်ပါနဲ့.
ဆက်ဆံရေး၏အစအဦး၌, များစွာသောစုံတွဲများထွက်နှင့်အတူတကွအသစ်သောအရာလုပ်နေတယ်ပျော်မွေ့. သင်အတူတကွဖူးဘူးသောနေရာများမှရက်စွဲများအပေါ်သွားကြဖို့ပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်သည်. စမ်းကြည့်ပါပြီးမှနောက်တဖန်ဤအမှုကို. အချစ်ဇာတ်လမ်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကူညီအတူတကွအသစ်သောအရပ်တို့ကိုမဖို့နဲ့ပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ရက်စွဲများသွားလိမ့်မယ်မသာ, ဒါကြောင့်လည်းနောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းလူတွေအတူတကွအသစ်အမှတ်ရစရာကြိမ်ဖန်တီးကူညီပေးပါမည်.
သတိရ, ဆက်ဆံရေးကိုအစဉ်မပြတ်အသက်ရှင်တိုးတက်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်ပျိုးထောင်နှင့်တက်ရောက်ကြရန်လိုအပ်ပါတယ်. ဤငါးပါးသောအကြံပြုချက်များနောက်တဖန်သင်တို့သူတို့အားရင်ခုန်စရာခံစားချက်တွေကိုမီးပွားချရန်ကူညီပေးပေမည်, ဒါပေမယ့်မဆိုအပ်ပေးတော်မူသောအချိန်တွင်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းကိုသတိပြုမိဖြစ်ခြင်းမှအစဉ်အမြဲအာရုံစိုက်မှုကိုသင်နှင့်သင့် partner ၏အတွင်းပိုင်းလောင်ကျွမ်းစေသူတို့အားနွေးထွေးသောခံစားချက်တွေကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်.